IPalladium Hotel ithola isikhundla esiQinisekisiwe se-Autism Center
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Ezokuvakasha Ezitholakalayo » IPalladium Hotel ithola isikhundla esiQinisekisiwe se-Autism Center
Ezokuvakasha Ezitholakalayo • Izindaba Zezinhlangano • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zeDominican Republic • Human Rights • Izindaba • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
IGrand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa iyindawo yakamuva yokuba yi-Certified Autism Center (CAC) ukusiza ukuqinisekisa ukuthi izivakashi nemindeni enezingane ezine-autism zinolwazi olungcono kakhulu. Abazali abanezingane kwi-autism spectrum bavame ukuthola ukuvakasha kuyinselele ngenxa yezidingo zezinzwa, imikhawulo yokudla nokukhathazeka kokuphepha.
Indawo yokungcebeleka, eseDominican Republic kodwa eheha izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba, yaqalisa uhlelo lokuqeqesha nokunikeza izitifiketi olunikezwa yi-International Board of Credentialing and Continuing Education Standards (IBCCES). Sekuyiminyaka ecishe ibe ngu-20, i-IBCCES ibingumholi wemboni ekuqeqesheni i-autism kwabaqeqeshiwe bezempilo nabafundisi emhlabeni jikelele. I-IBCCES ibonile ukuthi imindeni eminingi enezingane ezinezidingo ezikhethekile inezinketho ezinomkhawulo zokuhamba futhi yakha izinhlelo ezikhethekile zomkhakha wokungenisa izihambi nowokuvakasha.
“KwiPalladium Hotel Group, kubaluleke kakhulu ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezithile eziqinisekisa imisebenzi emnandi nephephile emindenini, ezinganeni nasebusheni nasezinhlelweni ezibandakanya imizwa. Inhloso yethu ukuthi yonke imindeni ithole induduzo nokuzethemba ngokwazi ukuthi izingane zayo zisendaweni enhle, ngaphandle kwezidingo zazo. Sifuna ukuqinisekisa amaholide angasoze alibaleka emindenini yonke, ”kusho uFelipe Martínez Verde, oyiChief Operations Officer-America yePalladium Hotel Group.
Ngenkathi ucwaningo lukhombisa ukuthi ukuvakasha kungenye yemicimbi evusa ubuhlakani kubantu abathile, kusenezinketho ezimbalwa zokuqeqesha eziqeqeshiwe neziqinisekisiwe zabazali abafuna izindawo ezingakwazi ukwamukela izidingo zabo. Izinhlangano ezinjenge-IBCCES nePalladium Hotel Group zisebenza ukuguqula lokho.
“Sijabule ukusebenzisana nenye indawo enhle esizibophezele ngayo ukusiza labo abasemkhakheni. Sifuna ukudala izinketho zokuphepha ezihambisana nezinzwa zabazali nabantu ngabanye, ukuze bakwazi ukuvakashela izindawo ezihamba phambili emhlabeni wonke futhi babe nokuthula kwengqondo, ”kusho uMyron Pincomb, onguSihlalo weBhodi le-IBCCES. "Isikhungo sethu se-Autism Center sinikezwe izinhlangano ezingundunankulu eziphothule ukuqeqeshwa okunzima futhi ezihlangabezana namazinga aphezulu embonini."
Izindawo eziningi zonke izinketho ze- "autism-friendly"; kodwa-ke, leli gama alikhombisi ukuqonda kweqiniso kwezidingo zale mindeni. Abazali abaningi manje bafuna izindawo eziqede ukuqeqeshwa okususelwa ocwaningweni kanye nokubuyekezwa kobuchwepheshe ukuqinisekisa isipiliyoni esihle kakhulu esingaba khona. I-IBCCES iphinde yakha i-AutismTravel.com, insiza yamahhala eku-inthanethi yabazali ebala izindawo eziqinisekisiwe futhi exhuma imindeni kwezinye izinsiza kanye nomunye nomunye. Indawo ngayinye efakwe ohlwini kusayithi ihlangabezane nezidingo ze-Certified Autism Center, ezibandakanya ukuqeqeshwa kwabasebenzi okunzulu kanye nokucwaninga okwenziwa esizeni okwenziwa ochwepheshe abahola phambili be-autism. IGrand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa nayo izofakwa ohlwini namanye ama-CACs ku-AutismMember.org, ubambiswano phakathi kwe-IBCCES ne-Autism Society ukuxhuma imindeni nabantu ngabanye ngamabhizinisi nezinsizakusebenza ezibophezele ukusebenzela abantu ohlangothini oluthile.
Ukuletha i-Global Standard For Training and Certification ku-The Field of Cognitive Disorders - IBCCES inikeza uchungechunge lweziqinisekiso ezinikeza amandla ochwepheshe ukuthi babe ngabaholi emkhakheni wabo futhi bathuthukise imiphumela yabantu ababasebenzelayo. Lezi zinhlelo zamukelwa emhlabeni wonke njengebhentshimakhi ehamba phambili ekuqeqesheni nasekunikezelweni kwezitifiketi ezindaweni ze-autism nokunye ukuphazamiseka kwengqondo. Njengengxenye yokuzibophezela kwethu ekwabelaneni ngezinto ezintsha kanye nocwaningo, ama-IBCCE abuye abambe i-International Symposium on Cognitive Research and Disorders ukudala inkundla yokubambisana phakathi kwababambiqhaza bemboni.
Mayelana nePalladium Hotel Group
Ngokususelwa e-Ibiza eziQhingini zaseBalearic, iPALLADIUM HOTEL GROUP iyinhlangano yamazwe amaningi esungulwe eminyakeni engamashumi amane edlule ngenhloso yokuqhakambisa isiqhingi saseSpain naseYurophu yonke. Eminyakeni edlule iqinise isikhundla njengenye yezinkampani zaseSpain ezaziwa kakhulu emhlabeni jikelele. IPALLADIUM Hotel Group iyinkampani yodumo esebenze ibanga elide ukuhlukanisa amahhotela ayo nokwethula imikhiqizo emisha kulayini ngamunye, iphishekela inqubomgomo yokwandiswa okungaguquguquki kanye nokufeza izindinganiso eziqinile zekhwalithi. Njengamanje, leli qembu linezikhungo ezindaweni eziningi emhlabeni jikelele ezibandakanya i-Ibiza, Mallorca, Menorca, Barcelona, ​​Madrid, Valencia, Oviedo, Fuerteventura, Tenerife, Córdoba naseSeville eSpain, eSicily e-Italy naseMayan naseNayarit Rivieras IMexico, iPunta Cana neSanto Domingo eDominican Republic, eMontego Bay eJamaica naseSalvador de Bahia eBrazil.
I-Paradise Sun Hotel Manje Ifuna I-Seychelles Isimeme...